आर्बौ खर्चेर किन चुनाव गर्ने भन्दा बास्कोटाको जवाफ : कोरोना लाग्नेले किन भात खाने ? – Ramailo Sandesh
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्नु प्रतिगमन भयो भने अब कार्तिक र मंसिरमा हुने चुनावपनि तेस्रो प्रतिगमन हुने टिप्पणी गरेका छन् । हिजो राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने पनि स्पष्ट पारे । उनले चुनाव हुँदैन ? भनेर कसले भनेको भन्दै जंगिए ।